07 / 04 / 2020 | RayHaber | raillynews
Maalinta: Abriil 7, 2020
Daqiiqadihii ugu dambeeyay ..! Qarax ayaa ka dhacay Warshadda Roketsan; Madaxweynaha warshadaha Difaaca Ismaaciil Demir ayaa yidhi, "Wax qasaaro nafeed ah ma jiro marka loo eego natiijooyinkii ugu horreeyay ee aan ka helnay qaraxii ka dhacay Roketsan," ayuu yiri Al-Ankara Almadag. [More ...]
Gaaritaanka Shabakada Napeerka ah, howlwadeenka ISPARK wuxuu la wadaagay khataraha iyo welwelka asxaabtiisa iyo deegaanka uu ka shaqeeyo. Wareejinta ayaa sidoo kale ku jira codsiyo ka yimid shaqaalaha ISPARK inta lagu guda jiro faafitaanka: xiriir toos ah oo lala yeesho daraasiin dad ah [More ...]
Agaasinka Guud ee TCDD wuxuu daabacay warqad maanta oo uu ku dhawaaqay in shaqaalaha TCDD ay xiran karaan dharka bilaashka ah si looga hortago cudurka Coronavirus. Badbaadinta shaqaalaha fayraska, taas oo Memur-Sen uu si adag u codsaday tan iyo bilowgii coronavirus [More ...]
Citizens of the Republic of Turkey Tareennada State sii wadaan in ay heerka ugu badnaan aan halis u koronavirüsl iyo xidhhidha dagaalamaan. Macnaha guud, iyada oo saldhigyada, saldhigyada iyo saldhigyada si joogto ah loo nadiifiyo, rakaabkeennu si fudud ayey u fududaan karaan [More ...]
Degmada Antalya ee Magaalo-Weyne waxay sii wadaysaa qaadista tilaabooyin looga difaacayo caafimaadka bulshada cudurada ku dhaca coronavirus iyo cudurada faafa. Macnaha guud, wuxuu dul saaray nadiifiyeyaasha gacmaha meelaha joogsiga gaadiidka dadweynaha. Dawlada Hoose ee Magaaladu waa wadan cusub [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Kayseri waxay sii wadaysaa dadaalkeeda ah inay u hoggaansanto tallaabooyinka coronavirus. Magaalooyinka waaweyn, daraasadaha ayaa lagu soo kordhiyey qaab dhismeedka la kordhiyey. Kooxo Boliiska Magaalada Caasumadda ah ayaa ku celceliyay ogeysiisyo "Joog guriga" oo qaybo kala duwan oo magaalada ah [More ...]
Codsi cusub oo soo jiidasho leh oo ku aaddan muhiimadda joogitaanka guriga, marka lagu daro ka-hortaga jeermis-dileyaasha iyo jeermis-diidka ayaa bilaabmay ka dib markii cudurka dilaaga ah ee coronavirus lagu arkay waddankeenna, [More ...]
Wasiirka Karaismailoğlu wuxuu dib u eegis ku sameeyay dhismaha wadooyinka Magaalada Başakşehir İkitelli City Hospital, oo la furi doono bisha May iyada oo la raacayo tilmaamaha Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan, oo ay wado Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha. Halkaas wuxuu ka sheegay bayaanno xubnaha saxaafadda [More ...]
Aagga Agaasinka Hawlaha Dekadda Izmir iyo xafiisyada shaqada maalin walba waa la bakhtiiyaa, dabka shaqaalaha iyo macaamiisha soo gala dekada waa la cabbiraa oo marinka xanniban lama oggola. Kastamyada, amniga iyo shaqaalaha dekada [More ...]
Ururka Ganacsatada Da'da yar ee Aegean - EGİAD waxay Webinar ku qabanqaabisay 'Seminar shaqaale Farsamaysan iyo Tababbarka Shaqo barasho' kaas oo dib loo dhigay sababo la xiriira COVID -19. Xariirka Internetku wuxuu u furan yahay xubnaha isagoo kaashanaya Atik Metal [More ...]
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay sii wadaysaa kor u qaadista wacyiga iyadoo la qaadayo tillaabooyin cusub oo lagula dagaallamayo faafitaanka coronavirus. AŞTİ wuxuu ku laalaadaa gawaarida gaadiidka dadweynaha, gaar ahaan dhismayaasha adeegga dowladda hoose, suuqyada iyo isgoysyada wiishka iyo suuqyada. [More ...]
Si ka soo horjeedda hadalkii Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mudane Adil Karaismailoğlu ee Khadka Başakşehir - Kayaşehir Line, dhismaha wadadan tareenka waxaa la joojiyay muddadii Madaxweynaha MeBB Mevlüt Uysal. Dhismaha ayaa markale bilaabay Juunyo 2018 [More ...]
Dadka deggan Bursa Feejignaan ..! Jadwalka Bursaray ayaa Bedelay; Maamulada maxalliga ah ee sii wadaya inay qaadaan tillaabooyin cusub oo looga hortagayo cudurka Coronavirus ee ka dhaca Bursa ayaa sidoo kale isbedelay saacadihii Bursaray. Ku dhawaaqista duulimaadka ugu dambeeya waxaa lagu qaban doonaa 21.30 magaalada Bursaray [More ...]
Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir waxay ku rakibtay kamarad kuleylka meelaha ay cufnaanta aadanaha ku badan tahay ee ka dillaacay coronavirus. Muwaadiniinta, oo qandhadooda lagu cabiro isticmaalka kamarada kuleylka, ayaa ku qanacsan dalabka. Qaadista tallaabooyin ilaa heer sare oo ka dhaca Izmir sababtuna tahay cudurka dillaaca coronavirus [More ...]
Arkas Holding: Waxaan ku taagan Turkey ee National Solidarity Waxaan Trust
Arkas iyo la-hawlgalayaasheeda ah TIL lammaane Marport Port Operations waxay siisay 3,3 milyan TL ololaha Ololaha Qaranka. Ka sokow xariiqyadeeda ganacsi ee ugu waa weyn, maraakiibta, maareynta dekedaha iyo adeegyada saadka, dhammaan kaabayaasheeda [More ...]
Madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu wuxuu kulan qayaxan ku yeeshay khadka taleefonka wakiilada waaxda gaadiidka dadweynaha, kuwaas oo waqti adag ku qaatay cudurka daacuunka 'coronavirus'. Isagoo xusuusinaya in IMM ay sidoo kale la kulantay khasaare miisaaniyadeed oo culus, ayuu yidhi Imamoglu, [More ...]
Taariikhda Maanta, Abriil 7, 1917 Guutada 13 madaafiic oo Masaarida ah, oo ay la socdaan Bedouins-kii uu amar ku bixiyay Lavvrence, waxay dhaawaceen 20 bilays iyo dhowr tiir oo taleefanno u dhexeeya Müderric-Gifye. Ka dambeya weerarada [More ...]